Bufee Ozi 2.0 Web | Martech Zone
Wednesday, November 18, 2009 Tuesday, May 6, 2014 Adam Obere
Oke nke ozi, ngwa, na azịza ọhụụ bịara gị? Ama m na m! Kpọọ m nzuzu, mana ụfọdụ n'ime ihe ndị m kwuru taa nwere ike ịbụ akụkọ ochie nye ọtụtụ ndị, mana yana ọtụtụ ozi dị ebe ahụ, ndị nwere ike ijide. Ọ gwụla ma ị Douglas Karr or Kyle Nwachukwu - nke site n'ụzọ, ekwenyesiri m ike na ha anaghị ehi ụra!
Amalitere m iji ụfọdụ ngwaọrụ nhazi iji debe nkọwa niile na nlele. Ndị a bụ ole na ole m hụrụ aka:
Na-atọ ụtọ: Ọ dị mma, dịkwa mma, amaara m na ọtụtụ n'ime gị na-agụ nke a nwere ike ịmaraworị banyere Delicious. Amatakwala m ihe, ma ruo mgbe ụwa nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya gbanwere, ọ nweghị mmetụta ọ bụla. M hụrụ n'anya na m nwere ike ibe edokọbara na mkpado pụọ na agbanyeghị kọmputa m nọ na ya, ebe m nọ, ana m enwekarị ọkacha mmasị m n'ebe ahụ. Toghara ịkọ ebe dị mfe ma dịkwa mfe ịchọta njikọ ndị ahụ niile Achọrọ m icheta. Dị ka blọọgụ na-adịbeghị anya, webinar na-akpọ, ma ọ bụ ọbụna otu isiokwu.
Picnik: Ọzọkwa, ndị na-ere ahịa bụ ndị okike na anyị ga-enwe ike imewe na tuo. M nwere ike chepụta mgbe ọ dị mkpa, ma mgbe m chọrọ ihe ngwa ngwa, mfe, na mfe… I choose picnik! Karịsịa maka ọrụ ndị ahụ ịchọrọ ịme ntakịrị ntakịrị na-enweghị oke ike ụbụrụ. Ha interface bụ nnọọ mfe iji na ọzọ dị ka ọ bụla weebụ dabeere na ngwa… .i nwere ike ịnweta gị eserese ọ bụla.
Feedburner: Site ugbu a ejiri m n'aka na ị na-eche, olee nkume ọ nọ n'okpuru? Ọ bụghị nke ukwuu .... Cheta, Adị m onye ọrụ na-ere ahịa na-atụgharị ya niile AZ! Achọrọ m ngwa ngwa, achọrọ m dị mfe, ọ dịkwa m mkpa ịlaghachi na ya mgbe ntụtụ. Ọ bụ ezie na amaara m mgbe niile ma hụkwa feedburner n'anya maka ikike RSS, mana m mụtara n'oge na-adịbeghị anya banyere ikike iji tinye ụdị email na blog gị. Ma mgbe ahụ metrics, dị jụụ na m ga-enwe ngwaọrụ ndị a niile n'ime usoro Google m kwa ụbọchị.
Ngwa Google: Achọghị m ịdị ka onye na-etinye aka na Google n'ihi na dị ka ọtụtụ ndị ahịa ndị ọzọ enwere m nsogbu oge niile site na ha na-achọ imeziwanye ọchụchọ m. Agbanyeghị, na Delivra, anyị niile na-arụ ọrụ site na Google Apps maka ihe niile yana ebe m ji n'aka na ego akwụ ụgwọ dị ukwuu ma e jiri ya tụnyere ngwanrọ desktọọpụ ọ bụla, enwere m mmasị na ngwa dị iche iche site na ozi, kalenda, saịtị (nke anyị hụrụ n'anya!), Ihe ederede, ị na-akpọ ya. Ugbu a amaara m na ọ bụghị nke zuru oke, mana nnweta ahụ na eziokwu ahụ anaghị adaba otu ugboro n'ụbọchị rere m.
SmartSheet: Nke a nwere ike bụrụ naanị ngwa nke ọtụtụ n'ime gị nwere ike ọ gaghị amata banyere ya. M hụrụ SmartSheet n'anya dịka m bụ onye na-eme ndepụta oge niile. Kedu ihe ọzọ m ga-esi na-agụ ọtụtụ puku ihe m na-eme kwa ụbọchị? Ka o sina dị, ngwa ahụ na-enyere m aka ijikwa ọtụtụ ịme ihe ebe m nwere ike ịkwado ha site na mkpa, soro ndị ọzọ kerịta, dezie edezi ebe ọ bụla, bipụta ma ọ bụ nweta ebe ọ bụla m nwere ike ịbụ.
N’ebe ahụ ka inwere ya, ngwa ise dị mfe na-egbochi m ịnabata oke ozi. Ọ bụrụ na ị bụ onye agụụ na-agụ agụụ oge ọ bụla ma ọ bụ naanị agụụ na-agụ oge, tinye ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a n'ime akpa aghụghọ gị ma ị ga - enwe ike ijikwa ibu ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, tụlee ha hyperlinks ọhụrụ maka ihe ị maraworị na ịhụnanya.
Nov 19, 2009 na 2:09 AM
Ọ masịrị m Diigo ka ọ masịrị Ọ bụ ezie na Google Sidewiki na-ebido ịdọta uche m maka ike nkọwa ya nke yiri (echeghị na ọ bụ ike) na nke Diigo.
Nov 19, 2009 na 4:05 AM
Cissa obere ndepụta Carissa. Ọ na - egosi na nchịkọta nke nyiwe dị iche iche anyị niile na - azụ ahịa chọrọ iji nweta ihe anyị. Ana m achọpụta SmartSheet. Dị ka drthomasho, m na-ahọrọ Diigo ka ọ bụrụ Ihe na-atọ ụtọ n'ihi na ị nwere ike idetu ihe na ibe. Mkpado adịghị njọ, mana na Diigo enwere m ike iji mkpado na "mkpisi" na ibe iji lekwasị anya n'otu ngalaba nke ọdịnaya niile echekwara. Lee gị anya n'oge na-adịghị anya! –Paul
ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ weebụ
Ọkt 3, 2011 na 8:15 AM
Enwere m olile anya na onye ọ bụla ga-enweta ọkwa a na-ezi ozi ma jiri ngwaọrụ ndị a bara uru iji mee ka saịtị ahụ rụọ ọrụ.
Feb 12, 2012 n’elekere 7:28 nke abali